Gastric Perforation (အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Gastric Perforation (အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gastric Perforation (အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း)
Gastric Perforation (အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Gastric perforation ဆိုတာဘာလဲ။
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းဟာ အစာအိမ်နံရံမှာ ရှိတဲ့ အပေါက်ကြောင့် အစာအိမ် ပေါက်သွားခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အစာအိမ်နံရံမှာ အပေါက်ဖြစ်ရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ appendicitis နဲ့ diverticultis အစရှိတဲ့ ရောဂါတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိခိုက်မိခြင်းတွေဖြစ်နဲ့ ဓါးထိုးခြင်း၊ သေနတ်ပစ်ခံရခြင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သည်းခြေအိတ်ပေါက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူဟာလည်း အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း နဲ့ တူညီတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ပြနိုင်ပါတယ်။
Gastric perforation ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Gastric perforation ဟာ အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးမှာပါ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူမျိုးတိုင်းမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Gastric perforation ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Gastric perforation ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ peritonitis တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဗိုက်အလွန်နာနိုင်ပါတယ်။ နာကျင်မှုဟာ တစ်ယောက်ယောက်က ဗိုက်ကို ထိမိခြင်း၊ စမ်းကြည့်ခြင်း (သို့) လူနာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ရင် ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ လဲလျောင်းနေတဲ့အခါ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်ဟာ ပူနေနိုင်ပြီး မာနိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းရဲ့ ယေဘုယျလက္ခဏာတွေသာမက peritonitis ရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့
ဆီးနည်းခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ လေမတက်ခြင်း
သင့်မှာ ဒီလက္ခဏာတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကုသမှု ခံယူသင့်ပါတယ်။ အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းဟာ အရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ အသက်အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ ပြန်ကောင်းနှုန်းဟာ ရောဂါစောစီးစွာတွေ့ရှိမှုနဲ့ ကုသမှုပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ဘာတွေက Gastric perforation ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း ကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့
အသက်ကြီးသူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတဲ့ အူအတက်ရောင်ခြင်း
အစာခြေ လမ်းကြောင်းရောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ diverticulitis
အူရောင်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ Crohn’s disease, ulcerative colitis
Meckel’s diverticulum ရောင်ခြင်း
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းဟာ အောက်ပါအခြေအနေတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ကို ဓါးထိုးမိခြင်း၊ သေနတ်မှန်ခြင်း
Aspirin, NSAID, steroids ဆေးတွေကြောင့် အစာအိမ် အနာဖြစ်ခြင်း
ပြင်ပ အရာဝတ္ထုတွေ စားမိခြင်း
ဘယ်အရာတွေက Gastric perforation ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Gastric perforation ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Aspirin, NSAID, steroids ဆေးတွေကို မကြာခဏ သောက်သုံးခြင်း
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အချက်တစ်ခုရှိခြင်းဟာ အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း ဖြစ်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေဟာ ရောဂါဖြစ်နှုန်းကို ဒီအချက်မရှိတဲ့သူတွေထက် ပိုမြင့်တက်စေတယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အချက်တွေကတော့ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက် မရှိခြင်းဟာလည်း ရောဂါမဖြစ်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနဲ့ ဒီအချက်တွေကို ဆွေးနွေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Gastric perforation ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းကို အတည်ပြုခြင်းမှာ အောက်ပါအချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။
သွေးစစ်ဆေးခြင်း (သွေးဖြူဥ တက်ခြင်းကို သိရှိရန်)
ဝမ်းဗိုက်၊ ရင်ဘတ် X-rays ရိုက်ခြင်း
ဝမ်းဗိုက် CT ရိုက်ခြင်း
အချို့အခြေအနေတွေမှာ တူညီတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်က မှန်ကန်တဲ့ ရောဂါတွေ့ရှိမှုအတွက် အခြားရောဂါတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ စစ်ဆေးမှုတွေကို ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Gastric perforation ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းဟာ အသက်အန္တရာယ်ရှိတ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်မှု လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်နိုင်မှုဟာ ပေါက်တဲ့နေရာ၊ အရွယ်အစားနဲ့ ပေါက်တဲ့ကြာချိန်တွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ရောဂါကို စောစောသိရှိပြီး ကုသနိုင်လေလေ ရလဒ်ကောင်းမွန်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းဟာ ဝမ်းဗိုက်အတွင်းကို အစာတွေ စိမ့်ထွက်ခြင်းကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက် ခွဲစိတ်မှု ချက်ခြင်း လိုအပ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုဟာ အပေါက်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို လျှော့ချခြင်းတွေကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။။ အချို့အခြေအနေမှာတော့ မကောင်းတဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖြတ်တောက်ရနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အူဖြတ်ရရင် အူကို ကိုယ်ခန္ဓါ ပြင်ပကို ခဏထုတ်ထားခြင်း ပြုလုပ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓါပြင်ပသို့ စွန့်ထုတ်ခြင်း ကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်နံရံကို အူထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အူကနေ စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ ဝမ်းတွေဟာ ဝမ်းဗိုက်ကို ဆက်ထားတဲ့ အိပ်ထဲ ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှားပါးတဲ့ အစာအိမ်ပေါက်ခြင်းတွေမှာ အပေါက်ဟာ ပိတ်သွားပြီး ပိုးသတ်ဆေးသောက်ခြင်းနဲ့တင် လုံလောက်နိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Gastric perforation ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Gastric perforation ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ခြင်း
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 20, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 4, 2017
Gastric perforation. http://www.healthline.com/health/gastrointestinal-perforation#Complications6. Accessed November 14, 2016.
Gastric perforation. https://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_perforation#Signs_and_symptoms. Accessed November 14, 2016.
Gastric perforation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730417. Accessed November 14, 2016.
အစာအိမ်အောင့်ရင် အမြန်ဆုံးသက်သာစေဖို့ ဘာတွေကိုလုပ်မလဲ
ဆိတ်နို့နဲ့ နွားနို့ ဘာတွေကွာခြားလဲ။
ပူတဲ့အချိန် ခေါင်းကိုက်တတ်တာ တိုက်ဆိုင်မှုသတ်သတ်ပဲလား။
နေ့နဲ့ည အိပ်ချိန် မှားနေတဲ့သူတွေ သတိပြုသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် .။ ။